Maxkamada Hareysa oo Burisey Hadalkii Cige iyo Samsam oo lagu xukumay 5 sano
Maxkamada Hargeysa oo Burisey Hadalkii "Cige"
Maxkamaad magaalada Hargeysa oo shan sano ku xukuntay Samsam Axmed Ducaale, maxkamadaas oo siideysey darawalkii Samsam geeyey guriga Fooxle Axmed Yaasiin....
Hargeysa | SomaliTalk.com | December 15, 2004
Maxkamada Hargeysa oo markii ugu horerysey burisey hadalkii taliyaha Booliska Somaliland ee ahaa in Samsam ay tahay qof da'weyn.
Waxaa maanta (15/12/2004) ay maxkamada Hargeysa markii ugu horeysey burisey hadalkii taliyahay ciidanka "Booliska Somaliland", Maxamed Cige Cilmi, ee ahaa "Horta gabadhu Carruur ma ahan, waa naag xaas ah oo nin leh oo 20-jir iyo siyaado ah", hadalkaas oo taliyihu yiri markey taariikhdu ahayd Oct 22, 2004. Maxkamadu waxa ay cadaysay in Samsam Axmed Ducaale da'deedu tahay "17-jir". [Xaqiiqo ahaan Samsam waxay dhalatay 14 August 1988].
Laakiin waxaa Samsam lagu xukumay shan sano oo xabsi ah, taas oo lagu soo oogey labo kiis oo kala ah: in ay been ka sheegtay haybteeda, iyo in ay basaasada ahayd, waxayna intaas ku dareen in dhaqaatiirtii maamulkaasi ay sheegeen "in aan la kufsanin!!!!!". Waxaase si xaqiiqo ah loo ogyahay in 25kii November 2004 ay Raaqiya Oomaar shaaca ka qaaday in "Samsam ay sheegtay in ay kufsadeen Lix-nin oo ah Ciidanka nabad Sugidda Hargeysa ee loo yaqaan 'CID'". Arintaan ay Samsam afkeeda ka sheegtay waxay maxmamadii Hargeysa ee maanta ka dhigtay wax kama jiraan, ayan masaxdey doodaas kufsiga. Taas oo maxkamadaasi ay sheegtay "in aysan kufsi kula kicin booliska iyo hay'adaha dembi baarista".
Waxaa kale oo maxkamada Hargeysa sheegtay in dembiga basaasnimadu uu yahay in lagu xakumi lahaa 10 sano, laakiin in taas looga dhigay shan sano, arintaas oo maxkamadu sabab uga dhigtay in "Samsam da'deedu yartahay, oo ay tahay 17-jir". Arintaas oo toos uga hor imaneysa sheegashadii hore ee maamulka Hargeysa oo ahaa in gabadhani ay tahay qof da'weyn.
C/raxmaan Jaamac Hayaan oo ah guddoomiyaha maxkamada Hargeysa ayaa maxkamadaas ka sheegay in dembiyaas lagu soo oogey gabadha yar. Waxana uu sheegay in hal-sano loogu xukumay "been ka sheega haybteeda", afar sanona loogu xukumay "basaasnimada". Waxaana isla maxkamadaasi sheegtay in la siidaayey wadihii gaariga Samsam geeyey guriga madaxweyne ku xigeenka, taas oo la sheegay in lagu waayey "dembigii" lagu soo eedeeyey.
Qareemada u doodaya Samsam, ee xabsiga hore ugu mutaystay darteed, ayaa sheegay in ay rafcaan ka qaadanayaan xukunkaas aan loo meel deyin ee dusha looga tuuray Samsam, agoonta da'da yar. Dhanka kale warar aan ka helay ilo wargal ah oo jooga Hargeysa ayaa sheegaya in ay dhici karto in Daahir Riyaale uu "cafiyo" Samsam.
Qore: Siraad Aadan Cabdalla | Nov 5, 2003
Wararka kale ee ka imanaya Hargeysa ayaa sheegaya in arinta Samsam ay noqotay dhacdada loogu hadal haynta badan yahay, maamulka hargeysana ay ku adkaatay maaraynteedu. Waxaa kale oo jira warar sheegaya in Axadii dhoweyd ee 12/12/2004 in gaari uu leeyahay madaxweyne kuxigeenka Somaliland uu xabsiga dhexe ee Hargeysa geeyey Edna Aadan Ismaaciil oo ah wasiiradda arrimaha dibadda 'Somaliland', waxaana la sheegay in ay xabsiga gudihiisa joogtey saacado badan xabsigaas oo ay ku xiran tahay Samsam Axmed Ducaale, taas oo weliba la sheegay in ay Edna aragtay Samsam. Waxaana la sheegay in toddobaadkii hore ay shirkii golaha Wasiirrada 'Somaliland' ay Edna kaga hadashay arrinta Samsam.
SAMSAMEEY INA HOOYO SALAAN SARE IGA GUDOON
Samsam Axmed Ducaale oo ku dhalatay Dhahar, Soomaaliya, markey taariikhdu ahayd 14kii August 1988, waxay ahayd ardayad dhigan jirtey Dugsiga Sare ee Imaamu Nawawi, Boosaaso, kahor intii aanay u safrin hargeysa oo uu joogo nin Abtigeed ah, halkaasna Samsam lagu xiray 15kii August 2004, lagana xiray Guriga Fooxle Axmed Yuusuf Yaasiin, madaxweyne ku xigeenka "somaliland" gurigaas oo ay si khalad ah ku tagtay, laakiin markii uu "madaxweyne xigenku" arkay gabar xijaaban oo gurigiisa timid uu argagaxay. Waxana uu markiiba ku eedeeyey Basaasnimo iyo shirqool asaga lala maaganaa, waxana uu u gacan geliyey askar kuwaas oo kula kacay: Kufsi, jir-dil, ciqaab maskaxeed, khasab ku haysasho, kujirid xabsi dad-waaweyn, weydiin su'aalo ka tan-weyn, daryeel la'aan, iwm.... Waxaana Samsam lala xiray dareewalkii guriga keenay, Cumar Jaamac Warsame, waxana Cumar lasoo daayey maanta (15/12/2004). Waxa kale oo 24kii November, 2004, la xiray Qareemnadii u doodayey Samsam, waxaase markii dambe qareenada lasoo daayey 11kii Decemeber 2004.
Samsam arinteedu waxay noqotay mid caalami ah ay had iyo jeer hadal hayaan Soomaalida joogtaa qurbaha iyo gudaha Soomaaliya, waana tusaalaha caddaalad darrada ka jirta dhulka Soomaalidu degto ee ku yaal cirifka geeska Afrika.
Maxay ararinta Samsam ka yiraahdeen shacabka reer Naiorbi.. Lasocxo berri warbixintii Caanab Mumtaz ee Nairobi... insha Allah.
Buraanbur ay Nasoo Gaarsiisay Gabar Somaaliyeed (Dhibka Samsam)... Guji...